किशोर-किशोरी के चाहन्छन् ? – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > किशोर-किशोरी के चाहन्छन् ?
admin July 7, 2020 July 7, 2020 जीवनशैली, विचार, स्वास्थ्य	0
कोभिड– १९ का कारण लामो समयदेखि लकडाउन छ । हरेक पेशा, व्यापार, व्यावसाय धराशायी बनेको छ जसको कारणले हरेक परिवारका सदस्यले विभिन्न खालका सम’स्या झे’लिरहेका छन् । यस्तो बेलामा परिवारमा कसरी शारिरि’क र मान’सिक रूपमा स्वस्थ्य भएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकबीचको स’म्बन्ध र पारिवारिक वातावरणले किशोरकिशोरीमा प्रत्यक्ष अस’र पार्छ ।
बिहान चाडै उठ्दा स्वस्थ्य, बुद्धिमानी र यसरी धनी पनि भइन्छ! जान्नुहाेस्